च्याट तथा मेसेजिङ एप् ह्वाट्सयाप (ह्वाट्स अप) अब सँधैको लागि 'फ्रि' हुने भएको छ (ह्वाटस्एप चलाउन पैसा नलाग्ने) । विज्ञापन नदेखाउने बरु ह्वाट्सयाप चलाएको दोस्रो वर्ष देखि प्रयोगकर्तासँग वार्षिक ९९ सेन्ट (करिब १०० रुपैयाँ) लिने ह्वाट्सयपको बिजनेस मोडल थियो । केही वर्षअघि फेसबुकले ह्वाट्सयापलाई १९ अरब डलरमा खरिद गर्दा, यसको बिजनेस मोडलको खुबै चर्चा भएको थियो । फेसबुकले यति महंगो मुल्य हालेर, ह्वाट्सएपलाई नभइ आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई खरिद गरेको थियो भन्ने कुरा पनि चर्चाको विषय भएको थियो, किनकी प्रयोगकर्ताहरु फेसबुक भन्दा धेरै ह्वाटस्एप चलाउँथे ।
करिब १ अरब प्रयोगकर्ता रहेको दाबी गरिएको ह्वाट्सयाप निकै रुचाइएको च्याटिङ एपहरु मध्यमा पर्छ। ह्वाट्सयापले हिजो ब्लग मार्फत ह्वाटस्एपको बिजेनस मोडलले सोचे जस्तो काम नगरेको सार्वजनिक गर्दै, ह्वाट्सयाप अब सँधैको लागि फ्रि हुने घोषणा गरेको हो । सबै प्रयोगकर्तासँग डेबिट/क्रेडिट कार्ड नभएको तर दोस्रो वर्ष देखि पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा, आफन्तजनसँग ह्वाट्सयाप मार्फत नजिक हुन नपाएको कुरा ब्लगमा उल्लेख गरिएकोछ । यसको अर्थ, प्रयोगकर्ताहरु पैसा तिर्नु नपर…
युट्युबमा आजबाट नेपालमा ट्रेन्डिङ भइरहेका भिडियोहरु हेर्न सकिने भएकोछ । गुगल'ले नेपाललाई लक्षित गरेर युट्युब सञ्चालन सुरु गरे सँगै युट्युबमा यो सुविधा उपलब्ध भएको हो । गुगलको एसिया प्यासेफिक ब्लगका अनुसार नेपाल सहित पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि यसै प्रकारको सेवाको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।
युट्युबको लोगोमा NP लेखेर, गुगल'ले, युट्युब नेपालको जनाउ दिएको छ। युट्युबको नेपाल संस्करणले नेपाल र नेपालीलाई लक्षित गरेर भिडियो बनाउने युट्युबप्रयोगकर्ताहरुलाई, धेरै नेपाली प्रयोगकर्ताहरु सम्म पुग्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै युट्युबमा भिडियो हेर्ने नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले पनि नेपालमा रुचाइएका, धेरैले हेरेका, भिडियोहरु हेर्न पाउनेछन् । अब ट्रेन्डिङ भिडियो सेक्सनमा नेपालमा रुचाइएका, चलिरहेका भिडियोहरु देखिनेछ । तपाईले हेर्ने भिडियोहरु या भनौँ तपाईको भिडियो हेर्ने शैलीको अनुसन्धान गरेर, गुगल'ले तपाईलाई मनपर्न सक्ने भिडियोहरु देखाउँदै आएकोछ । अब यो लिस्टमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका भिडियोहरु पनि थपिनेछन्।
नेपाललाई लक्षित गरेर गतवर्ष नै युट्युबले नेपाली भाषामा उपलब्ध गराइसकेको छ । त्य…
१) हाम्रो नेपाली किबोर्ड - नेपाली लेख्न चाहनेहरुको पहिलो रोजाइ ‘हाम्रो किबोर्ड’ बन्ने गरेको छ । दश लाख भन्दा बढि पटक डाउनलोड भएको हाम्रो किबोर्ड, एन्ड्रोइड २.२ भर्सन देखि माथिका सबै एन्ड्रोइडफोनहरुमा चल्छ । नेपाली लेख्नका लागि गुगलको किबोर्ड देखि लिएर अन्य दर्जनौँ किबोर्डहरु प्लस्टोरमा उपलब्ध छन् तर हाम्रो किबोर्डमा फरक फरक ३ प्रकारले लेख्न मिल्ने कारण सबैको रोजाइमा परेको हो । एउटै किबोर्डबाट, नेपाली ट्रान्सिलिरेसन, रोमन युनिकोड, नेपाली युनिकोडमा लेख्न मिल्छ । नेपाली टाइप आउने र नआउने दुबैका लागि यो एप उपयोगी छ । नेपाली टाइप आउनेले नेपाली युनिकोड प्रयोग गर्न सक्छन् भने, मदन पुरस्कार पुस्तकालयले बनाएको रोमन नेपाली किबोर्डमा हात बसेकाले, रोमन नेपाली युनिकोड लेआउट छान्न सक्छन्, त्यस्तै गुगल ट्रान्सि…
स्टिभ जब्सकै भिजनको बृहत रुपनै अहिलेका एपस्टोर, प्लेस्टोर, आइट्युन्स, मोबाइल एप्स आदि हुन्। उनले १९८३ मै “सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर”को कुरा राखेपनि, मोबाइलमा चाँहि सन् २००७ पछि मात्रै यस किसिमको अवधारणा भित्रियो । २००७ को जुनमा, स्टिभ जब्सले पहिलो आइफोन सार्वजनिक गरेर, स्मार्ट मोबाइलफोन युगको प्रारम्भ गरिदिएका थिए । आईफोन सँगै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरु पनि भित्रिए, बजारमा पुरानै शैलीबाट चलिरहेका नोकिया, मोटोरो…
युट्युबका अनुसार, एकपटक डाउनलोड गरेको भिडियो, ४८ घन्टा सम्म मात्र अफलाइन हेर्न मिल्छ । साथै, भिडियो अपलोडकर्ताले भिडियो अफलाइन हेर्नको लागि डाउनलोड गर्न दिने वा नदिने 'अप्सन'मा 'डाउनलोड गर्न नदिने' पनि भनेका हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा, उक्त भिडियो डाउनलोड गरेर अफ…
यो ब्लग तयार गर्दासम्म, ट्विटरमा #DonateOilTo…
असोज ३ गते जारि गरिएको, नेपालको नयाँ संविधानका बारेमा भारतले असन्तोष जनाउँदै, नचाहिँदो प्रतिक्रिया दिएपछि, ट्विटर, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भारतीय रवैयाको चर्को आलोचना गरिएकोछ । नेपालको तराईमा जारी आन्दोलनमा चासो देखाउँदै, असोज ४ गते सोमबार बेलुका, भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै, नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले #BackOffIndia ह्यासट्यागमा आफ्ना विचारहरु ट्विटरमा राखेका थिए।
सोमबार सुरु भएको "ब्याकअफइन्डिया" ह्यासट्याग, मंगलबार दिउँसो ट्विटर र फेसबुकमा संसारभर ट्रेन्ड भएको हो । यो ब्लग तयार पार्दासम्म ट्विटरमा १ लाख ८० हजार पटक #BackOffIndia उल्लेख गरिएको छ भने, फेसबुकमा ३५ हजार भन्दा धेरै पटक उल्लेख भएको देखिएकोछ । ट्विटर र फेसबुकले 'पब्लिक' प्रोफाइलको तथ्यांक मात्र देखाउने भएकोले, वास्तविकतामा यो संङ्ख्या अझै केही बढि हुनसक्नेछ ।
#BackOffIndia Trends Worldwide on Twitter on Tuesday,after the inappropriate comment on Nepal's constitution by GOI. pic.twitter.com/1VNyzLkB5w — Aakar Anil (@aakarpost) September 22, …
गुगल अनुवादक (ट्रान्सलेट)मा, नेपालीलाई अन्य भाषा वा अन्य भाषालाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ? अजिव सुनिने/देखिने अनुवाद देखेर हाँस्नु भएको छ? साइटमा तथा मोबाइल एपमा, हिज्जे नमिलेका नेपाली भाषाका विज्ञापन देखेर, गुगल अनुवादलाई सम्झिनुभएको छ?गुगल अनुवादकमा नेपाली भाषा २०१३ मा समावेश गरिएको भएपनि, अन्य भाषाहरु जस्तो नेपाली भाषा 'पर्फेक्ट' भइसकेको छैन । अत: अनलाइनमा नेपाली भाषा सुधार गर्नको लागि, गुगल'ले पहिलो पटक नेपालमा "आफ्नो भाषालाई माया गरौँ" कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अनलाइनमा नेपाली भाषा सुधार गर्नको लागि, मंगलबार सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म, ल्याङ्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र र अरू ४० भन्दा बढी स्थानीय शिक्षण संस्थाहरू, संघहरू र व्यवसायिक संगठनहरूसँगको सहकार्यमा ‘अाफ्नो भाषालाई माया गरौँ’ ट्रान्सलेटाथन गर्ने गुगल'ले जनाएको हो ।
गुगल एसिया प्यासेफिक, पब्लिक अफेयर र न्यु इमर्जिंङ मार्केट्स कम्युनिकेसन्सकी एमी कुनरोज्पान्या भन्छिन, “हामीलाई विश्वास छ, गुगल अनुवादले यो देशको लागि, यहाँको मानिसहरूका लागि र नेपाली भाषाको लागि नेपालीमा उपयोगी वेब बनाउनको लाग…
विद्यार्थीहरुले भोग्ने यस्तै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सिएसआइटी एसोसियसन र अस्कल'का विद्यार्थीहरुले, बिएस्सी सिएसआइटी (BScCSIT) पढ्न तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर, प्रवेश परिक्षा तयारीको लागि मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । अब ब्याच्‌लरमा आइटी पढ्न जुर्मुराए'का विद्यार्थीहरुलाई सिएसआइटी इन्ट्रान्स एपले सहयोग गर्नेछ ।
सिएसआइटी इन्ट्रान्स एपमा प्रवेश परिक्षा'को मोडल प्रश्नपत्रहरु तथा अघिल्लो वर्षका प्रश्नपत्रहरु राखिएको छ, जहाँबाट विद्यार्थीहरुले सजिलै ती परिक्षाहरुमा नि:शुल्क भाग लिन पाउँछन् । प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै जान सकिन्छ, जवाफ दिइसकेपछि, आउने स्कोरको आधारमा तत्काल आफ्नो जवाफ सही भयो कि भएन भनेर थाह…